भुकम्प पीडितको उद्दार र ब्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले के गर्‍यो ? के गर्दैछ ? (गृहमन्त्री बामदेब गौतमसँग बिशेष कुराकानी) – Gulmiews
भुकम्प पीडितको उद्दार र ब्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले के गर्‍यो ? के गर्दैछ ? (गृहमन्त्री बामदेब गौतमसँग बिशेष कुराकानी)
१५ बैशाख २०७२, मंगलवार ०२:३३ Sanju Kauchha
No comments	टफटकमा टेलिभिजन पत्रकार दिलभुषण पाठकले “भुकम्प पीडितका लागि सरकारले के गर्‍यो” भन्ने प्रश्न गर्दा किन कड्किए गृहमन्त्री बामदेब गौतम? उनले त बडो गज्जबको फुर्ती लगाए । सबै गर्‍यो नेपाल सरकारले, गर्न बाँकी केही छैन जस्तो । अन्तर्वातामा जोड्जोड्ले चिच्याउँदै कसरी उल्टै थर्काए प्रश्नकर्तालाई, हेरौ गृहमन्त्री गौतमसँग पत्रकार पाठकले गरेको बिशेष कुराकानी: